AKHRISO: Soomaaliya & Midowga Yurub oo kala saxiixday heshiis muhiim u ah Ummadda Soomaaliyeed. – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Wakaalada Wararka ee Soomaaliya ayaa baahisay in ay heshiic sub oo ku kacaya 42 Malyan oo Dollar kala saxiixdeen Midowga reer Yurub iyo Soomaaliya, kaas oo yoolkiisu yahay dhismaha wadooyinka muhiimka ah ee isku xiraya gudaha dalka.
Heshiiska ay wada galeen midowga Yurub iyo Soomaaliya ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo laga bixiyey, balse wararka ayaa sheegaya in heshiiska uu dhigayo in ay Midowga Yurub dib u dhisayaan wadooyinka laamiga ah ee aan mudada dheer helin dibu dayactirka muhiimka ah.
Wadooyinka isku xiraya gobalada Soomaaliya ayaan helin wax dibu dayactir weyn ah tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya 1991-dii, waxaana muuqata in ay hadda baahi weyn u qabaan dibu dayactir baahsan.
Soomaaliya ayaa deeqo caalami ah oo dhinacyo kala duwan ka hesha Caalamka, balse majirto ilaa hadda wax weyn oo laga qabtay marka la eego sida dhaqaalaha loogu leeyahay.
Dibu dayactirkan ayaa loo arkaa mid muhiim ah oo ku soo beegmay xili ay baahi weyn qabaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaana wadooyinka gobalada oo safaradu ay adag tahay in la maro, laakiin caqabadaha ammaanka ayaa keeni kara in ay fuli waayaan heshiisyada qaarkood.
Illaa iyo waagaan dhashay ka hor waxaan maqlayey soomaaliya iyo yurub baa kala saxiixday arimo wada muhiima.Inta badana ma aragno wixii la buu-buunin jirey ee la kala saxiixday meeshay mareen.Saas darteed soomaali xiiso cusub uma qabto hadalada noocaasa.Soomaaliya haddii ay hesho nabad oo laga daayo dhibaatada lagu wado waxba ugama baahan doonto yurub iyo saaxiibadood.